မီးငယ်ရဲ့ဒိုင်ယာရီ: မီးငယ်နဲ့ သင်္ကြန်
ရုပ်တခု စိတ်ကိုးဆယ် .....
သူများပျော်လို့ မပျော်နိုင် ရည်းစားပျောက်လို့မှိုင် ....
ဟော... အသံပေါင်းစုံကြားရပြန်ပြီ .. ကိုယ်လည်းပျော်ချင်သားလားကွယ် .. လူမှန်းသိတတ်စ ကလေးဘ၀အရွယ် ထဲက သင်္ကြန်လည်တယ်ဆိုတာ မီးငယ်ဘ၀မယ် ဘာမှန်းမသိရလောက်အောင် နေခဲ့ရတော့လည်း အခက်သား။
မီးငယ်ကလည်း ဆိုးတယ်ပဲပြောရမလား .. တနှစ်မှမလည်ရတဲ့သင်္ကြန် ... နီးလာတော့လည်း ရောဂါက တက်လာပြန်ရော .. လည်ချင်လိုက်တာ.. ကားနဲ့ .. ထိုင်ချင်လိုက်တဲ့ မဏ္ဍပ် ..
မေမေ.. မီးငယ် .. သင်္ကြန်လည်ချင်တယ် ..
မီးလေးရယ် .. သင်္ကြန်မှာကားနဲ့လည်တာ စိတ်ချရတဲ့ အဖော်တွေရှိမှ ကောင်းတာသမီးရဲ့.. ကိုယ်က မိန်းကလေးလေ .. ပြီးတော့ မေ့သမီးလေးက ချူချာပါပေ့ . နေမကောင်းဖြစ်လာမှာ သမီးရဲ့ .. မသွားပါနဲ့ သမီးရယ် .. အန္တရယ်ကလည်း များပါသေးတယ် .. လိမ်မာတယ် . အိမ်မှာ မုန့်လုပ်စားမယ်နော် .. ဘေးအိမ်တွေ လည်းလှုကြမယ်လေ .. မေတယောက်ထဲနဲ့ မနိုင်ဘူးလေ မေ့သမီးလေးရဲ့. .. ကူလုပ်လေနော် ..
ဒါဆိုလည်း . မီးငယ် မဏ္ဍပ်လေးတော့ ထိုင်ချင်တယ် .. တရက်လောက်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်လေ .. နော်.. မေ့
မီးငယ်ရယ်.. တနေကုန်ရေစိုကြီးနဲ့ ဖျားလာမှာမြင်ယောင်သေး .. ပြီးတော့ သင်္ကြန်မဏ္ဍပ်ထိုင်တယ်ဆိုတာ အ၀တ်အစားကအစ သူများနဲ့တူအောင် နေနိုင်မှလေ .. မေ့သမီးလေးက ရိုးရိုးလေး .. ပြီးတော့ ကိုယ်နဲ့ ခင်တဲ့ ရင်းနှီးတဲ့လူလည်း ရှိတာမဟုတ် .. မသွားရပါဘူး ..
အာ....... မေမေကလည်း ... အမြဲတမ်းပဲ .. မီးငယ်သွားချင်ပါတယ်ဆိုနေမှပဲ...
မီးမီးနော် .. မေမကြိုက်ဘူးလေ .. မလုပ်ရဘူးလို့ပြောရင် နှစ်ခွန်းထပ်ကဲမလာနဲ့ . ညည်းလေး စိတ်ကောက်ပြီး ငိုရင် ညည်းလေးပဲ ပင်ပန်းပြီးဖျားဦးမယ် .. ဒါပဲ .. စကားကြောထပ်မရှည်နဲ့ ... မသွားရဘူး .. မုန့်လုပ်မယ် .. ကူလုပ် .. ဒါပဲ ...
နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်း မရိုးတဲ့တေးသွားလေးတွေပါပဲ .. သတိရတယ် မေမေရယ် .... ကလေးဘ၀ထဲက အခုအချိန်ထိ သကြန်ဆိုတာ တီဗွီထဲမှာ ကျနေရတဲ့ မီးငယ်ဘ၀ .. အမြဲတမ်းလည်း ငို .. နှစ်တိုင်းလည်းငို .. မလည်ရလို့ ဂျီကျတာလေ .. ဘယ်လောက်ဂျီကျကျ မသိချင်ယောင် ဆောင်နေမြဲမေမေပါ .. မေမေ့ထက် စည်းကမ်းကြီးတဲ့ အဘွားနဲ့ ဦးလေးလူပျိုကြီးကြောင့်ဆို ပိုမှန်မှာပေါ့လေ .. မီးငယ်ထက် ၆နှစ်နီးပါးကြီးတဲ့အကိုတောင် ပေးမလည် မှတော့ မီးငယ်တို့ ဝေးပြီပေါ့ ...
အိမ်ရဲ့ မနီးမဝေးလေးက ဈေးကို မုန့်သွားကြိတ်ရင်း လမ်းမှာ ကလေးတွေ ပက်တဲ့ရေနည်းနည်းပါးပါး စိုတာမျိုး ( တခါတလေ စိုတောင်မစိုလိုက်ပါ .. ) မုန့်လိုက်ဝေလို့ မုန့်ဝေတဲ့အိမ်တွေက အနည်းအကျဉ်း လောင်းတာမျိုး လောက်ကိုပဲ စိုဖူးတဲ့မီးငယ် ရယ် လေ .. သင်္ကြန်ဆိုတာကို ဘယ်လိုပျော်မှန်းမသိ .. ဘယ်လိုချစ်မှန်းမသိ .. သင်္ကြန်ဆိုတာနဲ့ ပျော်လာတော့တာ .. အိမ်ထဲမှာ သီချင်းတွေအကျယ်ကြီးဖွင့် . ကွေးနေအောင်ကတော့တာ .... စိတ်ကောက်လည်း ခနပါပဲလေ . မီးငယ်ရဲ့ အကျင့်တခုက ခနခနလည်း စိတ်ကောက်သလို ခနခနလည်း စိတ်ပြေတာပါပဲ :D
အခုတော့ သင်္ကြန်ဆိုတာဘာမှန်းမသိတဲ့ အရပ်ဒေသ တခုကို ရောက်နေခဲ့ပြီပေါ့လေ.. နေရာဒေသသာ ပြောင်းလဲတယ် .. မီးငယ်တို့ ရင်ထဲက သင်္ကြန်ပိုးတွေက မသေသေးတာပါပဲ .. မနှစ်ကတော့ အိမ်မှာ သာကူ တရက်ကျိုဖြစ်တယ် .. ရုံးက တရုတ်မ သူငယ်ချင်းလေးကို ဖိတ်ပြီး ကျွေးတော့ ထိုင်းဆိုင်က မုန့်နဲ့တူတယ်တဲ့ .. ကောင်းချီးပေးတာလေး( .. မြန်မာသင်္ကြန်ဆိုတာ သူကဘာမှန်းမှမသိဘဲကိုး .. နှစ်ဆန်းတရက်နေ့မှာတော့ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ်ကွာဆိုပြီး ခွင့်ယူပြီး အုရှိခု ဘုရားကို သွားဖြစ်ခဲ့တယ် .. ကျောက်ကျောနဲ့ ကြာဇံကြော်တွေ လုပ်သွားပြီး ခေါ်သွားတဲ့သူငယ်ချင်းတွေကိုပါ လမ်းစရိတ်ကနေစလို့ ကုသိုလ်ယူဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် သင်္ကြန်ဆိုတဲ့ ခံစားချက် မရှိသလိုပါပဲး(
ဒီနှစ်သင်္ကြန် ရောက်လာခဲ့ပြန်ပြီပေါ့ .. ဂျပန်နိုင်ငံ သင်္ကြန်ဆိုလို့ မီးငယ် ရောဂါတက်ပြီး သွားလိုက်ပါတယ် .. သင်္ကြန်ဆိုတဲ့ ခံစားချက်ကို လုံးဝမရခဲ့တဲ့အပြင် စိတ်ထဲ သိပ်မကြည်လင်စရာ မြင်ကွင်းလေးတွေနဲ့ပဲပေါ့ ... တော်ပါပြီ သင်္ကြန်ရယ် .. သင်္ကြန်လွမ်းနေဆဲပဲ ညီမလေးတယောက်က လင့်ခ် တခုလာပေးတာနဲ့ ကောက်ဖွင့်လိုက်တော့ .. မြတ်စွာဘုရား ..... ရန်ကုန်သင်္ကြန်လည်း ပျက်စီးသွားရပြန်ပါပြီလား ... သင်္ကြန်ဆိုတာ မကြုံတွေ့ဘူးပေမယ့် သင်္ကြန်ရေဆိုတာ မထိဖူးဘူးလို့ ပြောရလောက်အောင် ဝေးခဲ့ရတဲ့ မီးငယ် .. သင်္ကြန်ဆိုတိုင်း သင်္ကြန်ရောက်တိုင်း ရောဂါထတဲ့ မီးငယ် .. သင်္ကြန်သီချင်းကြားတိုင်း ကချင်လောက်အောင် ဖြစ်တဲ့ မီးငယ် ... သင်္ကြန်ဆိုတာကို ကြောက်တဲ့ ခံစားချက် မဖြစ်ရပါစေနဲ့လို့ ဆုတောင်းရင်းနဲ့ပဲ ...................
နှစ်ဆန်းတရက်နေ့ ရောက်ခဲ့ပါပြီ .... အားလုံးပဲ ပျော်ရွှင်ဖွယ် နှစ်သစ်လေးကို ကြိုဆိုရင်းနဲ့ .. တနှစ်တာပတ်လုံး ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ရတဲ့ နေ့ရက်ကလေးတွေကိုသာ ဖြတ်သန်းကြရပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် ..
Posted by မီးငယ် at 11:04 AM
ဒီနှစ်သင်္ကြန်ကတော့ တိုကျို မှာဘဲ စိတ်ပြေလက်ပျောက်လည်ပစ်လိုက်တယ်ဗျာ..သင်္ကြန်ေ၇တော့
မ၇ှိပေမဲ့ တိုကျိုမိုးကြောင့် စိုခဲ့ ၇ပါေ၇ာလားဗျာ